Wararka Maanta: Sabti, Oct 6 , 2012-Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado inuu maanta magacaabo Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo muddo laga sugayay
Qabanqaabada xafladda lagu magacaabayo ra'iisul wasaaraha ayaa ka socota Villa Somalia sida ay HOL u sheegeen xubno ka tisran madaxtooyada, balse lama oga xilliga dhabta ah ee lagu dhawaaqayo ra'iisul wasaaraha.
Warar hoose ayaa sheegaya in laga yaabo in xilkan loo magacaabo C/qaadir Faarax Shir-doon (Saacid) kaasoo ka mid ahaa xubno uu madaxweynuhu kulammo gaar ah la yeeshay dhowr jeer oo isku xigta.
"Maanta ayaa lagu dhawaaqayaa ra'iisul wasaaraha, waxaana socda qabanqaabadii lagu magacaabi lahaa," ayuu yiri sarkaal ka tirsan madaxtooyada oo HOL la hadlay, isagoo intaas ka gaabsaday inuu sheego xilliga rasmi ahaan la magacaabayo ra'iisul wasaaraha.
Ra'iisul wasaaraha lasoo magacaabayo ayaa waxaa la horgeynayaan baarlamaanka si ay kalsooni u siiyaan isagoo markaas kaddib soo dhisi doona xukuumadda howlo badan ay horyaallaan, kuwaasoo ay ugu culus yihiin sugidda ammaanka iyo dib u dhiska dalka oo burbur kusoo jiray laabatameeyo sano.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tan iyo markii loo doortay xilkan 10-kii bishii hore ee September ayaa wuxuu dadaal ugu jirtay sidii uu kusoo magacabo lahaa ra'iisul wasaaraha, waxaana xilkan isku soo taagay in ka badan labaatan xubnood oo rajo ay kaga jirtay inay xilkan qabtaan.